Sarimihetsika hijerena mpivady: iza no tsara indrindra? | Omeo fialamboly aho
Gabriela moran | | Cine, Sinema mahatsiravina
Iray amin'ireo hetsika fampiononana indrindra tokony hatao ny mpivady ny mijery sarimihetsika amin'ny fakan'ny sofa. Mila misafidy izay hitazonana ny fahaliananareo roa ianareo hanakanana ny torimaso sy ny torimaso. Fantatray fa sarotra ny mandresy lahatra ny mpiara-miasa amintsika hahita ilay sarimihetsika tadiavinay, na ny mifamadika amin'izany. Mandritra ity lahatsoratra ity dia asehoko a fisafidianana sarimihetsika hijerena mpivady tsy misy olona matin'ny fahasosorana.
Betsaka ny karazana, fa amin'ny ankapobeny dia misy roa izay manaitra ny fahalianan'ny lehilahy sy ny vehivavy: hatsikana romantika sy sarimihetsika mampihoron-koditra! Tsy misy na inona na inona toy ny voahilikona amin'ny fotoana mampiahiahy indrindra ao anaty tetika mahatsiravina! Etsy ankilany, ny hatsikana romantika dia mamorona rivo-piainana mahafinaritra sy milamina ary tantaram-pitiavana. Ny fisafidianana dia misy ny naoty nomen'ny IMDb
Tianao jereo maimaim-poana ireo sarimihetsika ireo? Andramo ny horonan-tsary Amazon Prime ary ho hitanao ny maro amin'izy ireo
1 Fitiavana adala sy adala
2 Warren File: Ny fandrindrana
3 Amin'ny zon'ny fikosehana
4 Ny trano fitaizana zaza kamboty
5 Tsy misy adidy
6 Insidious (Ny alin'ny demonia)
7 Miasa mandroso… Sarimihetsika hijerena mpivady!
Fitiavana adala sy adala
Hatsikana romantika navoaka tamin'ny 2011 ary starring Emma Stone, Ryan Gosling, Julianne More, and Steve Carell. Notantaraina ny mpivady iray tamin'ny fizotran'ny fisaraham-panambadiana natombok'ilay fieken-keloka ny vadin'izy ireo. Rehefa avy nandre ny vaovao manimba, Cal (Steve Carell) mihaona amin'ny mpamitaka tanora iray (Ryan Gosling) izay manampy azy hivoaka amin'ny fanjakana ketraka ary mizara ny tetika fanodikodinana tsara indrindra aminy.
Nahatoky ny tenany indray i Cal ary nanomboka ny fandresen'ny vehivavy: mihaona amina vehivavy marobe amin'ny toe-javatra mampihomehy izy, izay mampiavaka ny mpampianatra ny iray amin'ireo zanany.
Mandritra izany fotoana izany Nifanojo tamin'i Hanna (Emma Stone) i Jacob (Ryan Gosling) noho ny kisendrasendra izay entiny mivantana any amin'ny efitranony ho iray amin'ireo fandreseny maro. Tsy ela dia nifankatia izy ireo ary nahita ny zava-misy mahakivy: Hanna dia zanakavavin'i Cal!
Mazava ho azy fa manohitra ny fifandraisan'ny zanany vavy amin'ny casanova i Cal ary manomboka fifandonana izay miafara amin'ny fahitana ny tena fihetsem-pon'ireo mahery setra rehetra.
Tsy afaka mijanona miaraka mijery an'ity sarimihetsika ity izy ireo, hihomehy mafy izy ireo!
Warren File: Ny fandrindrana
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny tantara tena izy momba ny toeram-pambolena iray izay manomboka hitranga ny fisehoan-javatra paranormal. Navoaka tamin'ny teatra tamin'ny 2013 izy io ary nanamarika ny iNy fiantombohan'ny andian-tsarimihetsika misy drafitra maromaro mifototra amin'ny famotopotorana ataon'ny mpikaroka paranormal malaza iray: ny Warrens.
Fianakaviana mifindra any amin'ny toeram-piompiana tsara tarehy izay misy zavatra hafahafa haingana izay mampihorohoro azy ireo: fanahy ao anaty lalimoara, marika tsy hay hazavaina amin'ny vatana, herisetra mivantana ataon'ny fikambanana iray amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana, sns. Rehefa afaka kelikely, ny reny dia nifandray tamin'ny vadin'i Warren, izay mpitsabo aretin-tsaina izay manadihady tranga tsy mahazatra.
Avy hatrany dia nahita tranga tsy ara-dalàna maro be ireo Warren ary ny fanadihadian'izy ireo dia nanambara ny tranga vehivavy iray izay voampanga tamin'ny famosaviana ary nonina tao amin'ny toeram-piompiana. Natolony ny zanany lahy ho sorona ho an'ny devoly hamono tena avy eo. Ilay mpamosavy resahina dia nibodo ny tenan'ireo mpikambana ao amin'ilay fianakaviana voakasik'izany ary nanapa-kevitra ny hanao exorcism i Warrens mba handroahana ilay fanahy ratsy.
Misy andiana zavatra "haunted" izay hita fa ampahany lehibe amin'ny sarimihetsika hafa izay ao anatin'ny franchise. Ity horonam-peo ity dia hitazomana anao tsy hanana ahiahy tsy tapaka. Tsy afaka mijanona tsy mijery an'ity na ny sarimihetsika sisa amin'ny franchise ianao!
Ireo lohateny hafa amin'ny saga feno dia ireto manaraka ireto: Anabelle (2014), Warren File: The Enfield Case (2016), Annabelle: The Creation (2017) ary The Nun (2018). Ho fanampin'izay, horonantsary vaovao no navoaka ho an'ny taona 2019.
Amin'ny zon'ny fikosehana
Starring Justin Timberlake and Mila Kunis. Ny tetika dia mitantara amintsika ny fiainan'i Jamie, scout talenta malaza any New York ary talen'ny zavakanto monina any Los Angeles antsoina hoe Dylan, izay omena fotoana hiasa amin'ny magazine lehibe any New York. Jamie dia miandraikitra ny fandresen-dahatra an'i Dylan handray ilay asa ary manolotra azy hitondra azy hijery ny tanànan'i Manhattan.
Avy hatrany dia manao fifandraisana izy ireo ary lasa mpinamana. Miresaka lohahevitra akaiky izy ireo ary samy manaiky fa tsy tokony hisy fihetseham-po na fanoloran-tena ny firaisana. ka lany ny fisarihana ary manapa-kevitra ny hanao firaisana izy ireo ary hanomboka karazana fifandraisana tsy misy fanoloran-tena izay ananany fisokafana hiresaka momba ireo tsy fifanarahana sy faniriana rehetra eo amin'ny sehatry ny firaisana.
Taorian'ny fihaonana vitsivitsy, Hitan'i Jamie fa tsy izany no tadiaviny ary manapa-kevitra ny hampitsahatra ny dinamika izy ary hiverina ho namana "mahazatra". Mihaona amina lehilahy iray hafa izay manomboka mampiaraka vetivety izy rehefa misaraka aminy aloha. Avy hatrany dia nanasa azy ho any amin'ny hetsika iray ivelan'ny tanàna ny namany Dylan mba hanelingelina azy, fa io dia io dia hiteraka mihoatra noho ny dia faran'ny herinandro ...
Ny trano fitaizana zaza kamboty
Izany dia Famokarana Espaniola izay nalaza tamin'ny 2017 ary mitantara ny tantaran'i Laura kamboty izay natsangana tamin'ny mbola kely. Taona maro taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hiverina any amin'ny trano fitaizana zaza kamboty izay nonina tamin'ny fahazazany izy niaraka tamin'ny vady aman-janany, izay natsangana ihany koa nefa tsy mahalala izany. Mikasa ny hamoha ny trano fitaizana zaza kamboty ho toy ny trano fanampiana ho an'ireo zaza sembana i Laura. Mpiasa ara-tsosialy iray antsoina hoe Benigna no nanazava fa voan'ny tsimokaretina VIH i Simón, zanakalahin'i Laura.
Mandritra izany fotoana izany dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny i Simón fa manana namana vaovao antsoina hoe Tomás izy izay manao saron-tava foana.
Nandritra ny lanonam-panokafana ireo fotodrafitrasa vaovao dia niresaka i Simón sy Laura; amin'izay mba mandositra ilay zaza ary miafina amin-dreniny. Raha mbola mitady azy i Laura dia sendra tovolahy iray nisaron-tava izay nanosika azy ary nanidy azy tao anaty trano fidiovana. Rehefa lasa izy dia hitany fa nanjavona ny zanany ary tsy nahita azy intsony. Enim-bolana taty aoriana dia mbola tsy hita ilay zazalahy ary nihaona tamin'i Benigna indray i Laura, izay tratry ny lozam-pifamoivoizana nahafantarana ny marina momba ny fiainany: nanan-janaka lahy antsoina hoe Tomás izy ary niasa tao amin'ny trano fitaizana zaza kamboty izay ananan'i Laura izao.
Nangataka ny fanampian'ny mpampita vaovao i Laura hitady an'i Simón ary notantarainy azy ny loza lehibe nitranga tao amin'io toerana io taona lasa izay. Nahita fomba hitadiavana ny zanany lahy indray izy tamin'ny farany ary nahatsapa ny fahamarinana mahatsiravina nanjo an'i Simon.
Tsy misy adidy
Hatsikana romantika starring Ashton Kutcher and Natalie Portman. Mpinamana roa mandritra ny fahazazana indray mihaona indray ary miafara amin'ny alina mafana amin'ny filan'ny nofo. Ny ampitso dia hitan'izy ireo izany Tsy mila manana fifandraisana izy ireo ary tsy izany no tadiaviny amin'izao fotoana izao, ka nanapa-kevitra ny hanohy ho mpinamana izy ireo ary tsy misy fanoloran-tena lehibe.
Nivoaka tamin'ny daty fisakafoanana sandoka izy ireo niaraka tamin'ny rain'i Adam vehivavy (Ashton Kutcher) izay mampiaraka amin'ny sakaizany taloha ary misy sakafo hariva tena hafahafa sy tsy mahazo aina.
Manohy ny dinamika izy ireo mandra-pahatsapan'i Adama fa tia an'i Emma izy (Natalie Portman) ary manapa-kevitra ny handresy azy, na izany aza ny zava-bita dia ny fanosehana azy lavitra kokoa. Niafina tao ambadiky ny asany tany amin'ny hopitaly i Emma mandra-pahitan'izy ireo fa tsy azo lavina ny fifankatiavan'izy ireo.
Insidious (Ny alin'ny demonia)
Ny ampahany voalohany amin'ny saga dia navoaka tamin'ny 2011 ary ny teti-dratsy dia mifototra amin'ny fianakaviana iray izay ny zanakalahiny latsaka an-koma ary notafihin'ny fanahy ratsy. Ny ray sy ny reny dia i Josh sy Renai. Manomboka miaina trangan-javatra mampivarahontsana sy tsy hay hazavaina ny fianakaviana. Lorraine, renin'i Josh, dia tonga nanampy ny namany Elise Reiner: vehivavy manana fanomezana manokana manolo-tena hanampy ny olona amin'ny toe-javatra mamoy fo. Izy dia afaka mifandray amin'ny olona, ​​fanahy ary demonia avy any ivelany.
Rehefa mitsidika ilay zazalahy kely resahina i Elise dia nanazava tamin'ny ray aman-dreny izy fa tsy ao anaty kôzy ny zanak'izy ireo. Fa manana ny fahaizana manao projal astral mandritra ny torimaso ary nanalavitra loatra ny vatanao, izany no maha very azy ary tsy afaka miverina aminy.
Nanambara i Lorraine fa ny zanany lahy I Josh, ilay raim-pianakaviana, dia manana ny fahaiza-manao mitovy ihany koa ka nanapa-kevitra izy ireo fa handeha hitady ny zanany lahy i Josh amin'ny iray amin'ireo dia ireo. Ao amin'ny tontolo hafa dia mifanena amin'ny zanany lahy izy ary hitany fa samy hain'ny demonia izy roa lahy izay azon'izy ireo nitsoahana.
Tsy misy atahorana i Josh sy ny zanany lahy! Na izany aza dia nahita fahamarinana mampangovitra izay namoy ny ainy i Elise.
Ny saga hatreto dia misy sarimihetsika efatra izay iarahan'i Elise Reiner miaraka aminay amin'ny dia lavitra sy fitsapana demonia tsy masiaka. Ny anaran'ny tohiny dia Insidious Chapter 2, Chapter 3 ary The Last Key.
Miasa mandroso… Sarimihetsika hijerena mpivady!
Tsy misy fialantsiny intsony! Tsy mila matory ... Ny fifantenana natolotra miaraka amin'ireo horonantsary hijerena mpivady ary ahitana hatsikana telo tantaram-pitiavana ary horonantsary horohoro telo dia manome antsika safidy mety tsara hampialana voly ny tenantsika. Manapaha hevitra fotsiny: Fampihorohoroana sa fifankatiavana?
Ataovy ny popcorn sy zava-pisotro mamelombelona! Ankafizo ireo sarimihetsika nofidinao tamin'ny tolak'andro na marathon tamin'ny faran'ny herinandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » Cine » Sarimihetsika hijerena mpivady